Nommi, onye na - eji ekwentị 4G rawụta nwere ọtụtụ ohere | Akụkọ akụrụngwa
Buru nduzi ma ọ bụ kwụsị nyocha akaụntụ anyị na netwọkụ mmekọrịta, ọ bụghị ihe dị ugbu a ejiji. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ nke ọma. Ihe ọzọ bụ, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị nweere onwe ha, yabụ ezumike bụ utopia n'ọtụtụ ọnọdụ. Otu n'ime ihe kpatara ya bụ enweghị ike ịrụ ọrụ n'ihi njikọ whenntanetị mgbe anyị na-anọghị n'ụlọ. Nke mkpa a a mụrụ ọrụ Nommi.
Nommi bụ rawụta 4G mobile nke nwere ụdị abụọ: Nommi ebughibu na Nommi Ike. Ha abụọ ga-enwe ọrụ dị iche iche iji nye gị, ma n'ụlọ ma mgbe ị na-anọghị ya. Ihe mbụ anyị ga - egosi bụ na ọ bụghị naanị MiFi, mana Nommi bụ ihe ọzọ. Anyị ga-enye gị ihe ngosi: ọ nwere ike ịrụ ọrụ dịka chaja ikuku maka ekwentị gị (nwee ọrịrị na teknụzụ Qi).
Ọfọn, ka na-amalite na mmalite. Nommi bụ, karịa ihe niile, rawụta na extender nke njikọ WiFi gị. Kpọmkwem, n'ụlọ ị nwere ike iji ya dị ka PLC Na nke ị ga-enweta mkpuchi WiFi ka mma na ebe ebe ntanetị nke ụlọ gị anaghị eru.
Ugbu a n'èzí ụlọ Nommi ga-akpa àgwà dị ka WiFi ma ọ bụ 4G rawụta. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta netwọọdụ WiFi mepere emepe iji jikọọ ka ị nwee ike ịrụ ọrụ, ị ga-enwekwa atụmatụ eSIM dị iche (kaadị SIM mebere). Ọrụ a dakọtara n'ihe karịrị mba 140, dịka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya si dị Indiegogo mkpọsa. Na mgbakwunye, ọ ga-adị mfe dị ka nbudata ngwa ntanetị. Nke a dị maka ma gam akporo na iPhone. You ga - ahọrọ atụmatụ ga - adịrị gị mma na mba ndị ị gara.
Ugbu a, kedu ihe ịchọrọ iji SIM ọ bụla ị nwere? Enweghị nsogbu ọ bụla: ihe ntanetị 4G a nwekwara oghere SIM. N'aka nke ọzọ, Nommi nwekwara ike ịrụ ọrụ dịka chaja mkpanaka. Thedị Slim nwere batrị milliamp 3.500 na ụdị ike nwere batrị 10.000 milliamp. Ọ ga - abụ nke ikpeazụ nwere ike ịnye gị chaja ikuku maka ama gị, ọ bụrụhaala na ọnụ ya dakọtara.
N'ikpeazụ, mgbe ha rutere ihe mgbaru ọsọ nke mgbasa ozi ego, ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịmalite mmepụta na mmalite nke afọ na-esote 2018. Iwu mbụ ga-ahapụ maka ọnwa nke June. Ọnụahịa nke Nommi Slim bụ $ 60 (50 euro na ọnụego mgbanwe) na Nommi Ike ruru 75 dollar (63 euro).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Nommi, mobile 4G rawụta na ọtụtụ ohere